တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ၏အလံတော် (中華民國國旗) တွင် အနီရောင်နောက်ခံပါရှိသည်။ လက်ဝဲဖက်ထောင့်၌ အပြာရောင်ထောင့်မှန်စတုဂံ ပါရှိပြီး ထိုထောင့်မှန်စတုဂံ၌ ရောင်ခြည် ၁၂ ကြောင်းဖြာထွက်နေသော အဖြူရောင်နေလုံးပါရှိသည်။ အလံ၏အမည်မှာ "ကောင်းကင်ပြာ၊‌ နေလုံးဖြူ၊ ကမ္ဘာနီ" (Blue sky, white sun and the wholly red earth) ဟူ၍ဖြစ်သည်။
အနီရောင်နောက်ခံ၊ လက်ဝဲဖက်ထောင့်၌ အပြာရောင် ထောင့်မှန်စတုဂံ၊ ထို့ထောင့်မှန်စတုဂံ၌ အဖြူရောင်နေလုံးပါရှိသည်
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ အာအိုစီ၏အလံကို လွှင့်ထူထားခြင်းဖြင့် ထိုင်ဝမ်နှင့်အခြားအုပ်ချုပ်ရာ ကျွန်းငယ်များသည် ပီအာစီအစိုးရမှ အုပ်ချုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အစိုးရမှ အုပ်ချုပ်လျက်ရှိသော လွတ်လပ်သည့်တိုင်းပြည်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြသနိုင်ပါသည်။ အချို့သော ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေး အားပေးသူများသည်လည်း ထိုအကြောင်းကြောင့်ပင် အာအိုစီအလံအား လွှင့်ထူစေလိုကြသည်။
စစ်အမိန့်ပေးအဖွဲ့ (Armed Forces Reserve)
↑ Taiwan singer upsets China with flag stunt - The Telegraph.7November 2013.
↑ "Myanmar's flag mistaken as Taiwan's in Okinawa"၊ 25 May 2010။
↑ With flag ban, Cambodia adds to Taiwan's woes (5 February 2017)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ၏_အလံတော်&oldid=658144" မှ ရယူရန်
၆ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၀၁:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၆ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၀၁:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။